Yedu Yakanakisa Ekuita Email Sarudza-MuChirongwa Yakave | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 21, 2016 Muvhuro, Kukadzi 22, 2016 Douglas Karr
My kushambadzira podcast waunoshanda naye, Erin Sparks, anofarira kundipa nguva yakaoma nezve yedu yekupinda-mukati zano pa Martech Zone. Tisati tataura nezve zvatakaedza uye zvakashanda, ndinofanira kutsanangura kukosha kweemail. Dai iwe wanga uchitarisa kuburitswa pamhepo semuchina, kutora email kero iri - nekure - iyo inonyanya kushanda nzira yekudzosa yakakodzera vashanyi kudzokera kune yako saiti.
Muchokwadi, ini ndichaenda sekutaura kuti yako email kero runyorwa ndiyo inonyanya kukosha uye kurira nzira yako saiti inogona kuve nayo. Ndosaka takavaka yedu email basa reWordPress. Nheyo inokura yevashandi panzvimbo yako ndeye metric yakanakisa yekuziva hutano uye kubatikana kweako zvemukati. Kana mushanyi akanyorera uye achikugamuchira iwe muinbox yavo (izvo zvinogona kunge zvatove zvizere), zvinoreva kuti vanovimba kukosha kunounzwa nesangano rako.
Kuunza iyo Welcome Mat
Isu takaedza toni yezvishandiso zvakasiyana kuyedza tora vashanyi vedu maemail kero kune yedu tsamba - asi kusvika parizvino, imwe chete ndiyo yakaita zvakanaka. Chokwadi, tinowana runyerekupe rwemaemail kero pano nepapo nematurusi atinoshandisa. Uye isu zvechokwadi tinodzivisa zvirongwa zvekukwezva vashanyi kunyorera seye sweepstake uye kupa. Tinoda vanyori vechokwadi vanonyorera nekuti vanoziva kukosha kwatinovaunzira. Tsamba yedu yetsamba inogara ichipa akasiyana siyana ezvekutengesa uye zvekushambadzira nyanzvi zvekutsvaga, kuwana uye kudzidza mashandisiro ekushambadzira tekinoroji kuvandudza mhinduro dzebhizinesi
A titambire mat yakazara peji furemu inowoneka kune vashanyi vatsva, inosundira saiti pazasi peji, uye ndokumbira mushanyi kunyorera. Pane yedu saiti, zvinoita kunge seizvi:
Izvo hazvishande chete, zvinoshanda zvinoshamisa mushe. Nepo mamwe marongero angaitiunzira vaviri vanonyoresa pamwedzi, yedu Welcome Mat iri kutitorera vashoma gumi vanyoreri ose chete zuva. Muchokwadi, rimwe zuva isu tanga tine vanopfuura zana vanyoreri kupinda-mukati. Yedu Yekutambira Mat iri kushandura kanopfuura ka100 zvirinani kupfuura chero imwe zano ratakatumira.
Kusiyana nepopup inokanganisa munhu mushure mekunge vatanga kuverenga, iyi nzira inovabvunza kuti vanyore vasati vatanga. Kana vasingade, vanongoti kwete kana kupururudza pasi peji racho. Iyo chikuva inotipawo isu mukana wekunonoka kuratidza kusarudza-kupinda zvakare. Uye isu tinogona kuyedza akasiyana mavhezheni neakagadziridzwa maturusi eseturu kuti tione kana rimwe richishanda zvirinani pane rimwe.
Kukura Yako Webhusaiti Inotungamira neSumoMe
The Gamuchirai Mat ingori yemamwe maturusi anoshanda uye anoshanda ekukudziridza yako webhusaiti shanduko mitengo. SumoMe maturusi matraffic akaiswa zvino uye akaiswa pamusoro peanopfuura mazana maviri emazana mawebhusaiti! Uye zvakanakisa zvese - chikuva chinopa zvinopfuura gumi nemaviri maturusi ekukubatsira iwe kutyaira shanduko uye kuwedzera yako saiti mashandiro.
Kana iwe uchimhanyisa iyo saiti yeWordPress, SumoMe zvakare inopa iyo WordPress Plugin kuti zvive nyore kuti utange iwe. SumoMe zvakare ine Chrome plugin, ichiita kuti isvike kune yavo chishandiso yakapusa sekubaya bhatani. Kupfuura zvese, ivo vanogara vachiwedzera nzira nyowani dzekukudziridza yako email rondedzero, kukurudzira kugovana munharaunda, uye kuyera kuita kwako saiti kuburikidza kwavo analytics zvishandiso.
Takabatana naSumoMe kuti utange - kusaina izvozvi kuti uwane zvishandiso gumi nemaviri pa hapana mutengo!
Edza SumoMe YEMAHARA!
Basa rakanaka Douglas. Ndakadzvanya chinongedzo paTwitter uye chokwadi chakagamuchirwa nekatambirwa mat kawakaenderera mberi nekunyora nezvazvo. Izvo hazvipindi munzira yezviri mukati zvandinenge ndiripo kuti ndione asi zvichiri kuoneka zvakanyanya.
Handina hangu kuisa email address yangu, but pamwe muchandiwana next time 😉
Iwe wakamboedza here A / B yakayedza inotungamira yekutora skrini inoonekwa kana mushandisi ARI KUSIYA webhusaiti? (skirini yakazara senge "Welcome Mat" yaizove "Bye-bye Mat" semuenzaniso 😉 )
Chikonzero handisi kuona kuti sei mushandisi, achisvika kuwebhusaiti yako kekutanga kuverenga chinyorwa, angaite njodzi yeku "kurasikirwa" nemukana wekuverenga iyo post nekupa email kero yavo ipapo (uye inogona kuendeswa kune imwe peji) pasina kuverenga kutanga iyo positi pachayo kuti uzive kana hunhu hwayo hwakakodzera kusiya email kero…
Kana iwe wakamboita iyo A / B bvunzo kare, unotsanangura sei kuti vanhu vangangove vanoda kusiya email kero yavo vasati vaverenga zvirimo pane kuti vaverenge zvirimo?
Kukadzi 22, 2016 na4:39 PM
Zvinofadza, Toni. Ini handisi nyanzvi pawebhu dhizaini neimwe nzira. Iwe ungaenda sei nezvekushandisa izvo kana ivo vachisiya saiti? Ne pop-up pavanodzvanya "x"?
Kukadzi 23, 2016 na3:45 PM
Hei Dean, zano rinoshandiswa rinonzi kubuda chinangwa, ichokwadi script inoona mbeva pointer kumhanya negwara. Sezvo munhu achisundidzira mbeva akananga kukero bar kana bhatani rekumashure, popup inogadzirwa.